Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa soo saartay Wareegtada Ogolaanshaha Safarka ee Goosashada Shaaha | RayHaber | raillynews
HomeGUUDWasaaradda Arimaha Gudaha ayaa soo saartay Wareegtada Ogolaasha Safarka ee Goosashada Shaaha
13 / 05 / 2020 GUUD, Gobolka Banaadir, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa daabacday wareegtada oggolaanshaha safarka ee goosashada shaaha
Wareegto dukumiinti safar ah oo ah soosaarayaasha / soosaarayaasha shaaha waxaa loo diray 81ka maamul goboleed ee Wasaaradda Arimaha Gudaha. Magaaladeenna, Ankara, Balikesir, Bursa, Eskisehir, Gaziantep, Istanbul, Izmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van iyo Zonguldak, iyo mid ama in ka badan oo gobolladaas ah oo safarkooda ah, ayaa la degey wareegtada. iyo Muwaadiniinta ka diiwaangashan Çaykur, waxay awoodi doonaan inay u socdaalaan gobollada ay ku yaalliin jardiinooyinka shaaha laga heli karo, maalinta Salaasada, 2020, iyaga oo shardi ka dhigaya inay heli doonaan Shahaadada Ruqsadda Safarka ee goosashada shaah ee cusub ee sannadka 19.05.2020.
Shaaha sameeya; Codsiyada Oggolaanshaha Safarka ee goosashada shaaha ayaa bilaaban doona 199:14 Khamiista, 09.00ka Maajo iyada oo loo maro nidaamka elektaroonigga ah ee e-dowladda ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Nidaamka Taageerada Daaciga ee Alo XNUMX. Kaliya soo saarayaasha shaaha ee ka diiwaangashan magaalada Çaykur ayaa dalban kara si loo helo Shahaadada Oggolaanshaha Safarka. Waxay sidoo kale awood u yeelan doontaa inay sameyso codsi ay ku soo saarto Ogolaansha Safarka ee loogu talagalay dadka qasabka ah ay weheliso soosaarayaasha / soosaarayaasha shaaha oo siin doona marin u helista kuwa soo saara shaaha.
Codsiyada waxaa lagu samayn karaa arjiga e-Codsiga iyo Nidaamka Taageerada Daaciga ee 199 ee Wasaaraddayada e-Dowladda.
Inta lagu gudajiro arjiga in lagu sameeyo nidaamka elektiroonigga ah ee e-xukuumadda ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Nidaamka Taageerada ee Aheynta aaminka ah ee Alo 199, codsadaha iyo shaqsiyaadka la socda; Su'aalaha gooni u goosadka ee 'Covid-19', inuu yahay soo saare shaaha oo ka diiwaangashan Çaykur iyo haddii dadka la socda ay ka mid yihiin weheliyaasha, ayaa si otomaatig ah loo marin doonaa nidaamka.
Kuwa aan dhib ku qabin weydiimaha Covit-19 oo la kulma shuruudaha lagama maarmaanka ah, Dukumiintiga Ogolaashaha Safarka ayaa si toos ah loogu soo saari doonaa nidaamka iyada oo aan la marin habraaca oggolaanshaha.
Soosaarayaasha shaaha / soosaarayaasha shaahad kuma jiri doonaan 14 maalmood gobollada ay u tagayaan goosashada shaaha inta lagu gudajiro dalabka, bannaanka jardiinka shaaha iyo meesha lagu bixiyo shaaha; Wuxuu samayn doonaa ballanqaad inuu u hoggaansamo xeerarka go'doomin bulsheed, inuu masar ku xiro xarumaha qaabilaadda shaaha iyo wixii la mid ah inta uu ganacsiga sameynayo. Kuwa codsanaya Shahaadada Oggolaanshaha Safarka waxaa loo qaadanayaa inay aqbaleen shuruudahan.
Oggolaanshaha Safarka ayaa hal ansax noqon doona
Ogolaanshaha Safarka ayaa la siin doonaa kuwa codsiyadooda loo arko inay ku habboon yihiin, hal jid. Kuwa la siiyay Ogolaanshaha Safarka waxaa looga baahan yahay inay ku nagaadaan gobollada ay booqdeen 30 maalmood. Kuwa bixin doona diyaarinta diyaarinta shaah waxay awoodaan inay ku laabtaan 72 saacadood gudahood.
Sms waa la ogeysiin doonaa kuwa ogolaanshahooda la aqbalo
Kuwa codsigooda oggolaanshaha laga aqbalo waxaa lagu ogeysiin doonaa adeegga farriinta gaagaaban (SMS) iyadoon loo baahnayn dukumenti. Dukumentiyada Oggolaanshaha Safarka ee la Ansixiyay ayaa loo gudbin doonaa isku-xireyaasha gobollada ay tagi doonaan iyo keydka macluumaadka ee waaxaha xoojinta sharciga si loo bixiyo kontaroolada lagama maarmaanka ah loona hubiyo isuduwidda lagama maarmaanka ah.
Soosaarayaasha shaaha ee la siiyay Shahaadada Ogolaanshaha Safarka waxay awoodi doonaan inay la safraan iyagoo goosanaya shaaha laga bilaabo 19:24.00 Talaadada, XNUMXka Maajo.
Xayiraad loogu talagalay Taksiyada Ganacsiga ee ay la socoto Wasaaradda Wareegtada Gudaha
Wasaaradda ayaa siidaayay Warbixinta Shilka Dhacdada tareenka Xorlu 416 Maalmood Kadib
Wasaaradda Arimaha Gudaha Ayaa Ku Dhawaaqday 31 Iyo Xayiraad Safar Oo Loo Kordhiyey Maalin Kale
Wasaaradda Gudaha ayaa Xayirtay Safarka 9 Magaalo
Red Brigades ayaa soo saartay hadal ka dhan ah line-tareenka xawaaraha sare ee Lyon Torino
Alstom ayaa sii daayay sawirrada muraayadda ee loogu talagalay wadamada
Wuxuu sii daayaa Warbixinta Qiimaynta Qeybta Siyaasadeed ee Siyaasadda ku Saleysan
Gaadiidka Kayseri wuxuu ku dhawaaqay in alaabada la ilaaway
Moovit sii deynta 2016 Warbixinta Adeegsiga Gaadiidka Guud ee Caalamka
Bixinta Lacag bixinta 2 kun TL oo loogu talagalay Shaqaalaha PTT
Gaadiidka TCDD Waxaa soo saaray Qawaaniinta Horumarinta iyo Isbedelka Magaca
TCDD oo sii deyneysa xayawaanka cagaaran ee Hemzemin
UTİKAD La daabacay E-Commerce Report
Yandex Falanqeynta Qorshaha Taraafikada Taraafikada